बिज्ञान प्रविधि – Page2– Nepali Ko Online
साइबर क्राइम इन्स्योरेन्स गराउन बीमा समिति तात्दै ८ कार्तिक २०७४, बुधबार ०३:०४
काठमाडौं, ८ कात्तिक । नारायण पौडेल। एनआइसी एसिया बैंकको स्वीफ्ट सर्भर ह्याकिङ गरी ह्याकरले ठूलो रकम चोरी गरेको घट्नाले नेपालको बैकिङ क्षेत्रमा साइवर क्राइम जोखिमको महशुस भएको छ । तर यस्तो जोखिमको बीमा भने नेपालमा छैन । सबै बैंक तथा वित्तीय..
यदि ५ सेकेन्डका लागि अक्सिजन गायब भए के हुन्छ ? जन्नुहोस् ६ कार्तिक २०७४, सोमबार १६:५१
एजेन्सी, ६ कात्तिक । अक्सिजन श्वासप्रस्वासका लागि चाहिने अत्यावश्यक तत्तव हो । यो गायब भएमा हामीलाई धेरै हानी पुग्न सक्छ । जानौं, के हुदो रहेछ त अक्सिजन गायब भएमा ? -५ सेकेन्डका लागि धर्ती एकदमै चिसो हुन्छ । -जति पनि मानिस समुद्र किनारमा..
विज्ञान र वैज्ञानिकबारे केही रोचक तथ्य, जुन थाहा पाउँदा पत्याउन मुस्किल पर्छ
एजेन्सी, ६ कात्तिक । विज्ञानका केही कुरा आज पनि मानिसहरू प्रायः विश्वास गर्दैनन् । विज्ञानले धेरै आश्चर्यजनक कुरा पत्ता लगाइसकेको छ । आज पनि यो संसारमा केही वस्तुहरू छन्, जसले विज्ञान र वैज्ञानिकलाई हैरान बनाएका छन् । जस्तैः हामी हेर्न सक्छौं–..
तपाईं हामीले दैनिक कैयन् वेबसाइट लगअन गर्छौं होला । कतिपय जानकारीमूलक त कतिपय मनोरञ्जनात्मक वेबसाइट धेरैपटक हेर्छौं । करोडौं वेबसाइट छन् इन्टरनेटको दुनियामा । त्यसैले धेरैको बारेमा हामीलाई थाहै हुँदैन । अझ कतिपय निकै उपयोगी तथा हेर्नैपर्ने..
कसरी फिर्ता लिने जिमेलमा पठाएका इमेल ?
एजेन्सी, ६ कात्तिक । बोलेको बोली र हानेको गोली फिर्ता लिन सकिँदैन भनिन्छ । यो केवल बोलेको बोलीको कुरा मात्र होइन इन्टरनेटमा कसैसँग गरिएका कुराकानीहरु वा पठाइएका इमेलहरुको हकमा पनि लागू हुन्छ । एकचोटी पठाइसकिएका इमेलका शव्दहरु पठाइएको..